Na ọnụnọ nke Bruno Le Maire, Minister nke Economy, Finance and Recovery, Elisabeth Borne, Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ, Employment and Integration, Emmanuelle Wargon, Mịnịsta ndị ọzọ nyefere Minista nke Mgbanwe Ọnọdụ Ebe obibi, nke na-ahụ maka Housinglọ, naAlain Griset, Onye nnọchi anya Minista nke Economy, Ego na Iweghachite, na-elekọta prislọ Ọrụ Obere na Ọkara, ndị gọọmentị ọkachamara na ụlọ na ngalaba ọrụ ọha na eze emeela nkwa siri ike maka ọrụ na ọzụzụ ọrụ aka Ihe ịga nke ọma France na-amaliteghachi.
1. France Relance na-enye nkwado nkwado na ngalaba ihe owuwu
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri euro 10 nke Ọchịchị na-akwado ga-akwado ọrụ nke ngalaba ihe owuwu ahụ. Akụkụ dị mkpa nke atụmatụ mgbake, 6,7 ijeri euro, na-etinye aka na mmezi ume nke ụlọ ọha na nke onwe iji belata oke ikuku CO2, ụlọ ahụ bụ isi iyi nke otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ikuku.
A ga-agbakwunye ego a na-akwado ọha ma ọ bụ na nzuzo, yana usoro ndị ọzọ France Relance na-akwado ngalaba ọrụ ọha na eze, dị ka atụmatụ itinye ego nke Ségur de la Santé, ngwangwa nke ụfọdụ ọrụ akụrụngwa ma ọ bụ enyemaka. na relaunch nke adigide ewu nke ...
N'akụkụ steeti ahụ, ndị gọọmentị a na-ewu iwu kwadoro ịkwalite ịmaliteghachi ọrụ, ọrụ na ọzụzụ ọrụ aka na ngalaba ihe owuwu. July 10th, 2021Tranquillus
GỤỌ Chemometrics isi 1/2: ụzọ anaghị elekọta
gara agaNdụmọdụ PowerPoint 2019: Chaatị eserese
-esonụNdụmọdụ PowerPoint 2019: Akwụkwọ ọgụgụ eji arụ ọrụ
Ọrịa Na-efe efe nke Mmiri